संक्रमितले भरियो टेकु अस्पताल, खतरा बढेपछि प्रशासनले जारी गर्यो यस्तो सूचना – Media News Khabar
साउन २३ काठमाडौ । पछिल्लो समय काठमाडौ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा फेरी संक्रमित बढ्न थालेका छन् । काठमाडौको अस्पतालहरुका वेड संक्रमितले भरिन थालेका छन् । एक सातादेखि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका बेड कोरोना संक्रमितले भरिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। टेकु स्थित अस्पतालमा संक्रमितका लागि ४० वेड छुट्याइएको छ । ति सबै वेड संक्रमितले भरिएका छन् ।
जारी निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन गरी गतिविधि गरे वा गराइएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही हुने ब्यहोरा समेत सूचनामा उल्लेख छ ।***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
Previous काठमाडौँबासीलाई खुसीको खवर ! दशैँलाई लक्षित गरेर देउबा सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी
Next आहा ! अनिताले भगवान् जस्ता श्रीमानले यसरी काधमा बोकेर डुलाउदै (हेर्नुस् भिडियो )